Ireo Biloagera Miteny Frantsay Miresaka Ny Oscars Sy Ny Césars · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Septambra 2017 4:58 GMT
Ny mpitantana ny lanonana Césars, Valérie Lemercier, mihira ilay gadona zouk malazan'ny taona 80 avy any Goadelopa.
Mitsinjarazara be ihany ny fomba fahitan'reo bilaogera ny lanonana Oscars sy Césars, natao tao Frantsa ny taona 2007 sy tany Etazonia. Faly ilay Kongoley Alain Mabanckou tamin'ny fitodihan'i Hollywood mijery an'i Afrika manomboka izao. Mahafaly azy manokana ny Oscar ho an'ny mpilalao mendrika, izay nomena ho an'i Forest Whitaker noho ny nilalaovany ny toeran'i Amin Dada. Nampitahainy ny fahalinan'ireo Amerikàna amin'i Afrika milahatra amin'izay fahitàny ny fambaboana fo ataon'i Frantsa amin'ilay tanibe manontolo izay mitatra mankany atsimon'i Alzeria, nandritra ny lanonana Césars, dika frantsay ho an'ny Oscars amerikàna. Ilay bilaogy InternetRapide.com avy ao Martinika , etsy ankilany, dia mitehaka ny nisafidianana ilay hira amin'ny teny kiriolona, gadona zouk avy ao Goadelopa nanokafana ny lanonana frantsay.
Alain Mabanckou [Fr], kongoley mpanoratra no sady bilaogera monina ao Kalifornia ary efa nahazo loka maro tamin'ny literatiora, manoratra hoe :
« Tsy isalasalàna fa misy zavatra mitranga amin'izao fotoana ao Hollywood tato anatin'ny taona vitsivitsy : mitodika misimisy kokoa mankany Afrika ny mason'ireo mpamokatra. Manome sarimihetsika ankafizin'ireo mpitsikera sy ny daholobe izany, ary mitondra antsika hahafantatra eny antsefantsefany eny ireo telenta afrikàna vaovao na safiotra afrikana-amerikàna.
Tsaroana ihany nony farany hoe [Forrest Whitaker] …dia nandeha irery talohan'ny nampalaza azy ankehitriny . Ary tsara ho azy raha toa io fanosorana azy io ka azo avy amin'ny sarimihetsika iray izay i Afrika no natao foto-dresaka. Mety mihilana kely i Idi Amin Dada any am-pasany any, na mibitsibitsika eo an-tsofin'ireo matoatoa hafa mpanao jadona hoe farafaharatsiny mba nisy nilàna azy ny jadona nataony!
Tanatin'ny fotoana fohy araka izany, nanome antsika sarimihetsika momba an'i Afrika ireo amerikàna na anglisy mpamokatra sarimihetsika, izay indraindray ireo mpilalao fototra afaka hita tao anatin'ny maro nilalao ny Totsi …; Hôtel Rwanda izay… nampihovitrovitra an'i Amerika ary nisy fiantraikany be miohatra amin'ireo fanadihadiana momba io raharaha io; Ilay Mpanjaka Farany Tao Ekaosy izay miverina mijery ireo halozàn'ny fitondrana Ogandey fony Idi Amin Dada notondroina ho nandringana olona maherin'ny 300.000 tamin'ireo mpiray tanindrazana taminy ; ny “Amazing grace” izay mamerina manontany momba ny varotra andevo Mainty, ahitàna an'i Youssou N’Dour misehatra ao anatiny ; ny “Blood diamonds” (Diamondra mihoson-drà) izay mampiseho tsara amintsika hoe maharitra mandrakizay ireo diamondra, saingy tsy maintsy sandaina vola sy rà latsaka! Tsy maintsy fintinina ve izany hoe manelingelina an'i Frantsa ireny lohahevitra ireny ka mahatonga azy, amin'ny alàlan'ireo kilalaonà famatsiambola, hifidy sy hamaritra ny karazana fomba fijery atodika amin'ny tanibe afrikàna?
Raha dinihana lalina, diso i Frantsa tsy mandray io zavatra io amin'ny fomba matotra, satria nalaky be i Hollywood nandray ny maridrefin'ny filàna tsy mitsaha-mitombon'ny mpijery erantany hankany amin'io tanibe io. Frantsa kosa, manana olana goavana mila vahàna miaraka amin'i Afrika izay jereny ho toy ny vomanga masaka tokony harapaka. Tsy izany i Hollywood. Jereo fotsiny ny lanonana Césars natolotra ny Sabotsy 24 Febroary 2007 …: hasiahana, fanaovana bemarenina mikiakiaka amin'ireo tsaho erantany – mahatonga ny sarimihetsika iray toy ny “Indigènes” – natolotra tao amin'ny Césars tao Hollywood teo ambanin'ny lohateny hoe “Days of Glory”, sarimihetsika alzeriàna – tsy nahazo na inona na inona tany Frantsa (ooh, ndeha ataontsika hoe nahazo ny lokan'ny “fisehoana hafakely/ tsy manampaharoa”). Tsy maintsy fintinina ve hoe tao anatin'ireny loka pariziana ireny, tsy nisy na iray aza azo notanisaina ny zavabitan'ireo afrikàna miteny frantsay? Cissako avy any Maoritania ? Haroun avy any Tchad ? Ooh, manana ny Fespaco azy ireo ry zareo any Ouagadougou, hoy angamba ny sasany ! Tsy nisy nilàna azy ve, nandritra ny fanolorana ny Césars, ny fanomezana voninahitra ny sarimihetsika avy amin'izao tontolo izao – dia ny avy amin'ny tanibe afrikàna koa ? Kanefa dia izany no nataon-dry zareo Amerikàna tamin'ny Alahady 25 Febroary 2007, tamin'ny nanolorany ilay loka malaza Academy Awards (Oscars). Vahiny roa, (Catherine Deneuve eìsy Japoney iray izay tsy tsaroako ny anarany) no tonga nanome voninahitra ny sarimihetsika avy amin'izao tontolo izao, ary hita nifandimby tao ireo sary avy any Espaina, Alzeria, India ary Afrika Atsimo…. sy avy any Frantsa !!! Raha tsy hilaza, ho an'ny Afrika, an'i Djimon Hounsou, ilay tsy azo ihodivirana ary tompon'iny andro iny, nipetraka tery aloha tery, tsy lavitra an'i Di Caprio (ato ny sarin'izy roa) ».
Mahaliana ny mamaky ny fomba fijery hafa mihitsy naroson'ny InternetRapide.com[Fr], tamin'ny fanehoany ny hafaliany noho ny nanokafan'ny mpitantana ny lanonana ny Césars tamin'ny fihiràna ilay zouk malazan'ny taona 80 avy any Goadelopa:
« Tena tsy nisy nanampo velively…Vantany vao nambara ny fisokafan'ny lanonana, tonga dia niditra an-tsehatra ny mpitantana ny lanonan'ny andiany 2007 ho an'ny Alin'ireo Césars … taminà gadona zpouk mihetsiketsika, tena fanasàna tokoa hifety sy hanao fitetezam-paritra.
Famerenana mahafinaritra sy fandihizana tamin'ilay hira malazan'ny tarika Zouk Machine…izay tsy afaka an-tsaina hatramin'ny 1989, taorian'ny 9 herinandro nitazonany ny toerana voalohany tamin'ny TOP 50 frantsay.
Ahoana no hisaorana an'i Lemercier noho ity fotoana mamy tamin'ny fahitalavitra ity, noho ity fanomezana voninahitra ny avy any ampitan'ny ranomasina ity? Valérie, mba tongava àry hijery anay “a kaz” (aty an-tanàna e)… “Nou ke Ba’w manjé, ba’w lanmou E pou vous nou ke fey an chantant”…”
Momba ireo Césars, fantsona iray mitovy ve no nojeren'ireo bilaogera roa ireo?